Mitohy ny hazalambo ireo mpimasina dahalo…: jiolahy mpanao “kidnapping” 19 no efa voasambotry ny zandary | NewsMada
Mitohy ny hazalambo ireo mpimasina dahalo…: jiolahy mpanao “kidnapping” 19 no efa voasambotry ny zandary
Nandritra ny fivoriana nanaovan’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena tomban’ezaka ny asa vitany no nahalalana fa efa nahatratra 19 ireo jiolahy mpanao “kidnapping” tao anatin’ny enim-bolana. Hotohizana ihany koa ny hazalambo atao amin’ireo mpimasina dahalo ireny…
Jiolahy mpaka an-keriny miisa 19 indray voasambotry ny zandary tao anatin’ny enim-bolana ka isan’izany i Del Kely, maty voatifitra nandritra ny fifandonana. “Misy amin’ireo dahalo ireo no miara-miasa amin’ny mpimasy”, hoy ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravaloma­nana Richard, nandritra ny fivoariambe nataon’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena (nahitana ireo mitazona ny fibaikoana na ireo lehibena vondron-kery isan-tsokajiny) teny amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly. Fivo­riana fanao isaky ny enim-bolana no nanaovana tomban’ezaka sy fijerena ny tanjona ho avy manoloana ny resaka fitandroana ny filaminana. Nambarany fa hohamafisina manokana ny fepetra amin’ireo mpimasy ireo. Misy amin’izy ireny no efa voasambotra sy maty voatifitra. Nam­barany fa miezaka hatrany ny eo anivon’ny fitandroana ny filaminana fa ao ihany ilay toetsaina matahotra ireny jiolahy mpaka an-keriny ireny. Samy mahafantatra izany ny rehetra ary misy aza tena misongadina vetivety ny fiainan’izy ireo. “Ny fahatongavan-tsaina no tena andrasana amin’ny rehetra ka sahy hifanampy amin’ny mpitandro filaminana”, hoy izy. Ireo dahalo mihevitra fa ireo mpimasy no tena herin’izy ireo. Nanome toromarika ireo toerana misy ireny dahalo sy mpimasy ireny ireo tompon’andraikitra, indrindra ny any ambanivohitra.
Mitohy ny fanadiovana…
Manoloana ny tsikera ma­hazo ny zandary manao herisetra sy/na mandika lalàna eo am-panatanterahana ny asany. “Efa nandray andraikitra hatrany ny eto anivon’ny zandarimariam-pirenena ary mitohy hatrany izany raha voaporofo ny fisiany”, hoy ny Seg. Nohitsiny aza fa mandray andraikitra amin’ireo zandary manao ny tsy mety sy/na manimba endrika ny zandarimariam-pirenena ary tsy anavahana na iza na iza izany. Na teo aza ny fangatahan’ireo olona sasany amin’ny hanafoanana ny zandarimaria dia mijoro hatrany izahay, araka ny nambarany. Ny zandary no tena ilaina any ambanivohitra sy amin’ireo andrimpanjakana ka izany no antony tsy hitsitsianay mihitsy amin’ireo zandary mandika lalàna, izay iarahanay midinika amin’izao fotoana izao sy angatahanay fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fia­rovam-pirenena. “Mbola ham­pihatra ny fanadiovana hatrany ny zandarimariam-pirenena”, hoy izy.